Admiral Faarax Qarre oo Sheegay in Laga Gaabiyey Ka hortaga Burcadbadeeda • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Admiral Faarax Qarre oo Sheegay in Laga Gaabiyey Ka hortaga Burcadbadeeda
Admiral Faarax Qarre oo Sheegay in Laga Gaabiyey Ka hortaga Burcadbadeeda
December 1, 2009 - By: Abdirahman. A
Taliyaha Ciidanka Badda DFKM ah ee Soomaaliya Admiral Faarax Qarre ayaa Beesha Caalamka ku eedeyey in ay ka gaabiyeen howlgalka ay ka wadaan Xeebaha Soomaaliya oo ay kula dagaalamayaan kooxaha Burcad Badeeda Soomaalida ee halkaas ka qowlaysta.
Admiral Faarax Qarre ayaa sheegay in DFKM ah ay ka walaacsantahay weerarada iyo xirfadaha hor leh ee ay la soo baxayaan kooxaha Burcad Badeeda,waxaana u sheegay in Maraakiibta dagaal ee ku sugan xeebaha Soomaaliya ay aad uga gaabiyeen howlgalkooda ay kula dagaalamayeen kooxahaas.
Isagoo Saxaafada la hadlaayay ayuu sheegay in daraasiin Maraakiib ee ku sugan xeebaha Soomaaliya aysan si daacad ah u gudan howshooda.
”Xirrirka u dhaxeeya Dowlada Soomaaliya iyo Beesha Caalamka ee ku aadan la dagaalanka Burcad Badeeda waa u yaraaday,Burcad Badeeduna waa ay si kordhiyeen weeraradooda”,ayuu yiri.
Taliyaha ayaa sidoo kale sheegay in ay jiraan Shakhsiyaadyo la shaqeeya kooxaha Burcad Badeeda Soomaalida kuwaas oo ku sugan Dekadaha ku yaala qaaradaha Afrika iyo dalalka Carbeed kuwaas oo Burcad Badeeda faahfaahin ka siiyaan maraakiibta halkaas ka soo dhaqaaqa halka ay u socdaan iyo goobta ay soo maraan.
Ugu dambeynti waxaa u sheegay in Ciidanka Badda ee DFKM ah ee Soomaaliya ay si aad ah ula dagaalami doonaan kooxaha Burcad Badeeda Soomaalida.
Aamino Ladan Axmed Cali